Munaasabad ballaaran oo lagu soo dhoweynayey madaxweynaha Soomaaliya oo ka dhacday London
Munaasabadan balaaran oo loo qabtay soo dhoweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda F. Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii uu hoggaaminayey ayaa habeenimadii xalay ka dhacday hool weyn oo ku yaalla bartamaha magaalada London.
Munaasabaddan oo ay soo abaabuleen jaalliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Ingiriiska ayaa waxa ka soo qayb galay kumanaan dadweyne ah oo isugu jiray odayaal, siyaasiyiin, aqoonyahanno, xildhibaanno ka tirsan barlamaanka Soomaaliya, haween, dhallinyaro, fanaanin iyo dibloomaasiyiin ka tirsan dowladda Ingiriiska.
Munaasabadda ayaa ugu horreyntii waxaa hadallo soo dhoweyn ah ka jeediyey siyaasiyiin hore iyo qaar ka mid ah qurbojoogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Ingiriiska, kuwaasoo dhammaantoodba muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin safarka uu madaxweynaha Soomaaliya ku yimid magaalada London ee xarunta dalka Boqortooyada Ingiriiska.
Wafdiga Madaxweynaha ee madasha lagu soo dhoweeyey ayaa waxa ka mid ahaa ku xigeenka ra'iisul-wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibedda ee Soomaaliya marwo Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan, wasiiru-dowlaha madaxtooyada mudane Faarax Sh. Cabdulqaadir, marwada madaxweynaha iyo xubno kale.
Kaddib hadalladii soo dhoweynta iyo heesihii guubabada isugu jiray ayaa waxa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mikrofoonka ku soo dhoweeyey xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo ah xildhibaan ka tirsan barlamaanka Soomaaliya.
Khudbadda madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku billaabatay salaam iyo mahadnaq uu u jeediyey jaalliyadda, kaddibna waxa uu madaxweynuhu ka hadlay xaaladda guud ee dalka, ujeeddooyinka dowladdiisa, arrimaha federaalka, xiriirka caalamka iyo kaalinta looga baahan yahay in ay qurbajoogtu ku yeeshaan dib-u-dhiska dalka.
Mudane Xasan Sheekh ayaa ugu dambeyntii soo hadalqaaday xiriirka cusub ee dowladda Soomaaliya la yeelatay caalamka, kaasoo uu ku sheegay in uu yahay guul u soo hooyatay guud ahaan dadka Soomaaliyeed, asagoo sidoo kalena qurbajoogta ku booriyey in ay kaalin muuqata ka qaataan howlaha dib-u-dhiska dalka.